Khadiija Maxamed Diiriye oo hal tallaabo ku amaantay hogaaminta Farmaajo + Video | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Khadiija Maxamed Diiriye oo hal tallaabo ku amaantay hogaaminta Farmaajo + Video
Wasiirka gargaarka Soomaaliya Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa dowladda Madaxweyne Farmaajo ku amaantay inay meel iska saartay oo la xisaabtantay diblomaasiyiinta shisheeye ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya, waxayna sheegtay 21-kii sano ee xildhibaan ay ka aheyd Soomaaliya uu haatan dalku joogo halkii ugu wanaagsaneyd.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay xero ku taalla GEDO + khasaaraha
Next articleOur places are pet-friendly, in order to usually take a trip with Fido.
Askari weerar dad badan ku dhinteen ka geestay Thailand (Daawo Sawirada)
CC Shakur”MD Farmaajo iyo taliskiisa nabadsugidda welin kama quusan muddo kororsi”
Sheekh Shaakir oo waraaq aan lagu farxin oo caawa soo diray iyo Galmudug oo….
Mareykanka oo war kasoo saaray HESHIISKA Axmed Madoobe, Seeraar iyo Xidig
SAWIRO: Xukuumada Somalia oo bilawday kulamo ku saabsan qaabka loo wajahayo Maqaamka Muqdisho…
WHO oo ka digtay in COVID 19 uu Afrika ku dili karo in ka badan boqol kun qofood
Dab xoogan oo goor dhow ka kacay qeybo kamid ah Suuqa Bakaaraha gaar ahaan…
CIA-da oo ku dhawaaqday go’aan culus oo la xiriira dilka Jamaal Khaashuqji iyo Bin salmaan….
Muxuu ka dhashay dagaal siyaasadeedka ‘hantida guud’ ee Farmaajo iyo Rooble?